Banaanbax xoogan oo hadda ka socda Magaalada Garoowe iyo Rasaas… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararka aan ka heleyno Magaalada Garoowe ee Caasimadda maamulka Puntland ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaas uu ka socdo banaanbax ballaaran oo ay dhigayaan dadka deegaanka Magaalada.
Dadweyne badan ayaa ka qeyb qaadanaya banaanbaxaas oo looga soo horjeedo Sicir barar xoogan oo dadka ay ka dareemeen Suuqyada Puntland iyo Lacagta Shiling-ka Soomaaliga ah oo la diiday.
Banaanbaxayaasha oo isugu jiray Haween, Caruur iyo dhalinyaro ayaa isugu soo baxay tartamaha Magaalada, kuwaasi ku qeylinaya erayo ay uga soo horjeedan diidama Lacagta Shiling-ka Soomaaliga ah.
Qaar kamid ah banaanbaxayaasha ayaa xirtay waddooyin muhiim ah oo ku yaalla Caasimadda Puntland, kuna xiray biro iyo dhagxaan, iyagoona mararka qaarkood gubaya taayaro waaweyn, sidoo kalena la maqlayo rasaas xoogan oo dhaceysa.
Magaalada Boosaaso iyo Magaalooyin kale ayaa waxaa horey uga dhacay banaanbaxyo looga horjeedo Sicir barar oo ka jiray halkaas, sidoo kalena waxaa xusid mudan in Suuqyada qaarkood ay xirnaayeen maalmo, kadibna dib loo furay.